CEE7 Schuko တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး CEE7 Schuko တိုးချဲ့မှု ကြိုး - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တိုးချဲ့မှု ကြိုး > ဥရောပ တိုးချဲ့မှု ကြိုး > CEE7 Schuko တိုးချဲ့မှု ကြိုး
CEE7 Schuko တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ငါတို့ ထောက်ပံ့ရေး CEE7 Schuko တိုးချဲ့မှု ကြိုး ၏ မြင့်သည် အရည်အသွေး နှင့် စီအီး, GS ခွင့်ပြုချက်။ ငါတို့ ကျိန်စာ ကိုကို သို့ တိုးချဲ့မှု ကြိုး အများကြီး နှစ်ပေါင်းဖုံးအုပ် အများဆုံး ၏ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် စျေးကွက်။ ငါတို့ ဖြစ်ကြသည် မျှော်လင့်ပါတယ် သို့ ဖြစ်လာသည် မင်းရဲ့ ရေရှည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွင် Chတွင်a.
CEE7 Schuko တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ကို 1.Product မိတ်ဆက်
CEE7 Schuko တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ၏ ၂။ ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
CEE 7/7 Schuko ပလပ်
2 ထမ်းဘိုးတို့ကို3ဝါယာကြိုး
3.Product Feature And Application of the CEE7 Schuko တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
အီးယူဂျာမန်အမျိုးအစားဥရောပဂျာမန်ပလပ်ဂင်တွင်လျှပ်စစ်နှုန်းထားများ 16A၊ ဗို့အား ၂၅၀V ရှိသည့် CEE7 /7(Schuko plug) နှင့် IEC884-1 စံထုတ်လုပ်မှုအရ၊ အမျိုးသမီးနှုန်းထားစံဥရောပဂျာမန် Schuko နှင့်လျှပ်စစ်နှုန်းထားများ 16A နှင့်ဗို့ 250V တစ်ခုတည်း Socket သတ်မှတ် CEE 7/7 ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျareaရိယာအဖြစ်ပလပ်အမျိုးအစားများအဖြစ်ဥရောပ AC ပလပ်နှင့် Sockets ဥရောပနိုင်ငံအများစုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
4. Production Details of the CEE7 Schuko တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
European CEE7 Schuko တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး comes in white, black or red for easy coordinating with surrounding decor. We produce the extension cords comes inavariety of sizes. Choose from 1-meter, 3-meter, 5-meter, 10-meters long, 20-meter (each sold separately) to accommodate the specific amount of length needed.
5.Product Qualification of the Single Outlet3Wire တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE, GS
6.Deliver, Shipping And Serving of the Single Outlet3Wire တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
hot Tags:: CEE7 Schuko တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း